अकेशा र शिल्पाको ‘लाइफ इन एलए’को ट्रेलर : जब ग्रीनकार्ड प्रेममा अवरोध बन्छ - Entertainment Khabar
अकेशा र शिल्पाको ‘लाइफ इन एलए’को ट्रेलर : जब ग्रीनकार्ड प्रेममा अवरोध बन्छ
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख १४, २०७९ समय: १७:०९:३०
काठमाडौं । आगामी जेठ ६ गते रिलिज हुने फिल्म ‘लाइफ इन एलए’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण पक्षले फिल्मको तीन मिनेट लामो ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो ।
अकेशा विष्ट, बास बासु र शिल्पा मास्केको मुख्य भूमिका रहेको फिल्मले अमेरिकी ग्रीनकार्ड प्राप्त गरेपछि प्रेममा आउने मुख्य पात्रको बदलाव र संघर्षलाई चित्रण गर्छ ।
मुख्य पात्रका अमेरिका र नेपालमा प्रेमिका हुन्छन् । ग्रीनकार्ड प्राप्त गरेपछि उसको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आउँछ ? कुन प्रेमिकालाई उसले रोज्छ ? के उसले प्रेमलाई निरन्तरता दिन्छ ? ट्रेलरमा यसबारे केही संकेत गरिएको छ ।
अमेरिकी सपना बोकेर हान्निएका नेपाली युवायुवतीको जीवनको नजिक यसको कथावस्तु हुने निर्देशक सूर्य एन श्रेष्ठले बताए । फिल्ममा गौरव पहारी, बुद्धि तामाङ, प्रकाश घिमिरे, लोकेन्द्र लेखक समेतको अभिनय रहेको छ ।
बास इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति रहेको फिल्मलाई ब्यास बासुले निर्माण गरेका हुन् । संसार सुवेदी कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा राजेन्द्र ठकुराठी निर्माता छन् । अमेरिकामा यसअघि नै प्रदर्शन भइसकेको फिल्म नेपालमा रिलिज गर्न लागिएको हो ।